Ummbila onyaweni - inkinga ukuthi manje lase libhekene cishe wonke umuntu ngezikhathi ezithile. Kukhona imfundo efanayo ngenxa yezizathu eziningi. Ummbila kungaba izinkinga kakhulu ukuphila umuntu, njengoba kuvame ukubangela ubuhlungu, evutha kanye nokuhlukumezeka uma uhamba. Ngenhlanhla, ngosizo izindlela zanamuhla futhi imithi yendabuko kusuka kusimo esinjalo luqedwe.
Corns izinyawo nezimbangela zabo
Ezimweni eziningi, amabhamuza zenzeka lapho egqoke Friend too noma, Ngakolunye uhlangothi, izicathulo okuxekethile kakhulu lapho isenzo mechanical esikhumbeni kwenzeka uma uhamba. Ngaphezu kwalokho, amaqembu ingozi abantu nge okuthiwa flatfoot transverse. Le ndlela unyawo sengozini, ngokuvamile livela abesifazane, njalo egqoke izicathulo sesithende esiphezulu. Ukuze ngezinyawo flat ilahlekelwa cushioning umsebenzi, okuholela non-iyunifomu ingcindezi nemiphumela mechanical esikhumbeni. Ngaphezu kwalokho, izibalo zibonisa ukuthi nommbila unyawo kuvamile kakhulu kubantu besifazane abakhulelwe kanye nabantu abaphethwe ukukhuluphala. engcupheni akunakubangelwa eqinile ukujuluka ezinyawo. Yiqiniso, corn kuba buhlungu kakhulu futhi kubangela ubuhlungu uma uhamba. Ngaphezu kwalokho, ngezinye izikhathi isimo zaba zimbi ngu Ukungena ukutheleleka kanye suppuration.
Calluses onyaweni nezinhlobonhlobo zazo
Yiqiniso, wonke umuntu uyazi ukuthi corn zingase zihluke. Ngokwesibonelo, kumiswa lwamanzi callus ezibandayo lapho ugqoke izicathulo Friend elinama obukhulu. Nge nenkinga enjalo, mhlawumbe, ebhekene yilowo nalowo owesifazane osuke ukugqoka izicathulo ezintsha. Kodwa kukhona okuqinile, osekukade corn, balahle kube nzima nakakhulu. Ngenxa yokuthi akhiwa ngenxa ukuqina corneum stratum. kuphakama izakhiwo ezinjalo ngokuvamile ngaphansi njalo ukuhilizisana lokukhanda. Dry corn kanzima has simise oyindilinga kanye phezulu it is bacwiliswa izicubu zomzimba ezithambile kwesikhumba. Yingakho isinyathelo ngasinye unikezwa, ubuhlungu eqinile abukhali.
Ummbila onyaweni: indlela ayibulale?
Nge lwamanzi corn ezithambile akunakwenzeka ukuba kukhona izinkinga. Njengomthetho, siyaqhekeka futhi iphele ngokwalo. Uma Nokho, kunesidingo esiphuthumayo ayibulale, kungenzeka ibhoboze ngokunembile soft shell disinfected inaliti ke ukusula isikhumba nge isinqandakuvunda.
Kodwa balahle calluses kanzima (corns) kunzima kakhulu kangakanani. Kodwa noma kunjalo akunakwenzeka ngisho zama ukuphuma isimila wedwa. Ngemva kwalimala isikhumba kuba lomasango enhle ngoba ukulawula ukutheleleka.
Nokho, ungazama ukususa nommbila unyawo ekhaya. Kuze kube yimanje, ochwepheshe batusa kuqala kahle ukuwapheka ngesitimu kunokuwabilisa isikhumba, isibonelo, ukulungisela ashisayo unyawo okugeza, unezela kancane umhluzi-oak amagxolo. Ngemva kwalokho, omunye ungazama ngobumnene ukususa sashintsha ungqimba Horny kanye corn.
Kodwa namanje inkinga efanayo kangcono ngokushesha ukuya kudokotela-wesikhumba. Kusukela corn isetshenziswa ukususa izindlela ezihlukahlukene - lokhu liquid nitrogen, kanye namadivayisi laser, kanye electrocautery imiklamo. Ngaphezu kwalokho, le nkinga kungakusiza futhi pedicure master - nge ekhethekile umshini ukugaya kuchwepheshe ukuze ahlanze isikhumba kusukela corneum stratum.
Kukhwehlela izinyane ebusuku: yini noma cha ukuze uzwakale alamu futhi yini okufanele uyenze
Yini imibhalo ukukhipha ukungena ezimpahleni ezingasuki phansi